Cape Ground Squirrel - Ezanyisayo - Mzantsi Afrika
I-Cape Ground Squirrel [Xerus inurisuris]
I-Cape Ground Squirrel yindoda enomdla eMzantsi Afrika. Ilinganisa i-450 mm ubude kwaye ilinganisa ukuya kwi-1 kg ubunzima. Iindawo ezingaphezulu ziyi-cinnamon ngombala kunye nomgca omhlophe ecaleni ngaphezulu komzimba. I-hamba phantsi kwaye inomsila onjenge-shay-fan emnyama namhlophe. Ingubo igxile ngezantsi. Ingubo yokubusika ibinakala ixesha elide kuneengubo yasehlotyeni.
Ngokuninzi i-herbivorous, kwaye itya kakhulu kwiingcambu kunye nee-bulbs agutywe ngamacwecwe kunye namazinyo angaphambili. Ezi zinto ezinzima zokutya zixutywa ngefestile efana neentambo ezibukhali. Sondla rhoqo kwizityalo ezikhethekileyo. Ngamanye amaxesha zithabatha i-zinamvuzana ehlotyeni.
Nangona amabhinqa ethwala ngokukhawuleza kwiinyanga ezintandathu, zezindala kunonyaka omnye zivumelekile ukuba zizalise. Amabhinqa aneemibini ezibini zeentlanzi ezinamathumbu kwaye ziqhele ukuzala ezincinane ezimbini anesithandathu ngamatitha, umntwana ngamnye osisigidi sama-20 amagremu. Ezincinci zinobuncwane kwaye zi-ze xa zizalwa.
Ukunyamekela ezincinci kubonakala kuyimfanelo yoluntu, kuba lo msebenzi ulwabeliswa ngamabhinqa ahlukeneyo kwikoloni. Eyindoda ekhulayo njengomlingani ozalanayo ukhuthazelwa ngamabhinqa aphezulu, aqhelekileyo ahamba kunye nabantwana babo kwiminyaka emibini ebutsheni. Ukushabalalisa inzala kwimimandla kwiindawo ezikufutshane kuphela kwenzeka emva kweminyaka emibini. Le pateni ye-dispersal ivumela ukubunjwa kwamaqela amatsha kunye nokuphucula ukuhamba kwemfuza.
Zihlala emathyolwenii ahlambulukileyo. Apho i-Cape Ground Squirrel ivela khona i-substrate iyahlukana kwintshontsho enqabileyo ukuya kunzima, ihlala kwihlabathi enobumba kunye nasecaleni komlambo.
Ukwabiwa kulo lonke elaseKalahari, eFree State, eNyakatho Kapa, ​​eNtshona-ntshona nakumaPhondo aseMzantsi Koloni ukuya kwisithili saseBeaufort-West / iGraff-Reinet.
Efana kakhulu nemikhwa nokubonakala kwenyama kwi-Mountain Ground Squirrel [Xerus princeps]. Nangona utshutshiswa ngamafama inani leCape Ground Squirrel lizinzile.